Xarunta Jaamacadda Georgetown ee Caddaaladda Bulshada waxay raadineysaa Agaasimaha Cilmi-baarista iyo Qiimeynta - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Iyada oo qayb ka ah jaamacadda ugu da'da weyn Katooliga iyo jaamacadda Jesuit, ayaa Xarunta Caddaaladda Bulshada (CSJ) wuxuu dhaqaajiyaa qiyamka Jesuit ee Jaamacadda iyo himilada iyada oo loo marayo shaqadeeda cilmi baarista, barida, iyo adeegga.
The Agaasimaha Cilmi-baarista iyo Qiimeynta wuxuu kormeeraa istaraatiijiyadaha qiimeynta iyo howlaha CSJ, quusinta, iyo barnaamijyada barashada bulshada ku saleysan iyadoo si wada jir ah ula shaqeyneysa xubnaha kooxda CSJ, hogaamiyaasha ardayda, kaaliyeyaasha cilmibaarista qalin jabinta, iyo la-hawlgalayaasha bulshada si loo cabiro saameynta barnaamijyada barashada khibrada leh ee ardayda GU, barnaamijyada kaqeybgalayaasha, iyo beelaha. Agaasimaha wuxuu abuuraa alaabtii gaar ah baahida qiimaynta barnaamijka; maareynta xog ururinta iyo daba galka; wuxuuna la shaqeeyaa xubnaha kooxda CSJ si wax ku ool ah loogu soo bandhigo xogta dhagaystayaasha kala duwan, oo ay ku jiraan deeq-bixiyeyaasha, iyada oo loo marayo warbixinno iyo daabacado kale. Guud ahaan, booskani wuxuu mas'uul ka yahay kobcinta dhaqanka milicsiga, barashada, iyo go'aan qaadashada ku saleysan xogta ee udhaxeysa kooxda CSJ iyo hogaamiyaasha ardayda.
U-warbixinta Agaasimaha Fulinta ee CSJ, waajibaadka Agaasimaha Cilmi-baarista iyo Qiimeynta waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
Kormeerka howlaha cilmi baarista ee CSJ, waana inuu lahaadaa hadaf iyo / ama mashaariic cilmi baaris socota, oo laxiriira himilada CSJ iyo baaxada shaqada.
Aqoonsiga iyo codsashada deeqaha cilmi-baarista.
La-tashiga macallimiinta, shaqaalaha, ardayda, iyo la-hawlgalayaasha bulshada ee ku saabsan fursadaha cilmi-baarista.
Bilaabidda iyo / ama fududeynta iskaashiga tacliinta-bulshada iyadoo la adeegsanayo habab ka qaybqaadasho; la talinta iyo diyaarinta ardayda ku daba jirta fursadaha cilmi baaris ee ku saleysan bulshada iyo bulshada.
Fududeynta nidaamka iyo nidaamka abaalmarinta ee CSJ wehelnimada cilmi-baarista shahaadada koowaad.
U adeegida xiriiriyaha CSJ ee Guddiga Dib-u-eegista Hay'adaha (IRB) iyo Xafiiska Qiimeynta iyo Go'aamada (OADS), wuxuu kaqeybqaataa ururo xirfadlayaal ah oo laxiriira, wuxuuna ushaqeeyaa sidii aqoon iyo aqoon tacliimeed kooxda CSJ.
Maaddaama uu yahay aqoonyahan ku hawlan, Agaasimaha Cilmi-baarista iyo Qiimeynta waxaa laga filayaa inuu ku daabaco maaddooyinka tacliinta, goobaha dib-u-eegista asaaga ah isla markaana uu ku soo bandhigo shirarka tacliinta.
Qayb sidii xubin buuxda xirfadeed ee kooxda CSJ oo ka dhigan CSJ iyo ka baxsan goobaha xirfadeed kala duwan oo ay ku jiraan shirarka iyo kulamada.
Waxay ka wadaagaan mas'uuliyadaha la-talinta ee ururada ardayda CSJ iyo raacitaanka barnaamijyada quusin.
Waxay kormeeraysaa laba caawiye oo qalinjabiyeyaal ah oo taageera qiimeynta booska iyo cilmi baarista.
Mawqifkani wuxuu la yimaadaa cinwaanka "Kaaliyaha Cilmi-baarista Kaaliyaha," muddo 3-sano ah oo la cusbooneysiin karo oo ku saleysan rikoor aad u wanaagsan oo ku saabsan waxqabadka cilmi-baarista sare, oo ay ku jiraan daabacadaha cilmiga leh.
Shahaadada Ph.D./Ed.D. ama shahaado kale oo terminal ah ayaa si weyn loogu door bidaa booskan. Meelaha la doonayo waxaa ka mid ah cilmiga bulshada ama cilmiga nabadda iyo khilaafaadka.
CSJ waxay raadineysaa Agaasimaha Cilmi-baarista iyo Qiimeynta oo leh rikoodh adag oo ku saabsan ballanqaadka ku-meel-gaarka ah ee deeqda waxbarasho iyo / ama u-doodista ku saleysan u-doodista, iyo waayo-aragnimada tacliinta sare ee howl-galka.
Musharaxa ku haboon An si fiican u yaqaanna ee arrimaha caddaaladda bulshada kala duwan, xeelado qiimayn oo tayo iyo tiroba, oo si weyn u abaabulan, u janjeedha si faahfaahsan, iyo iskaashi.
Aqoonsiyo la doorbiday
Khibrad baris waxbarasho sare oo soo bandhigtay khibrad ku saabsan waxbarashadda ee isbeddelka bulshada iyo ku hawlan baridda iyo barashada.
Aqoonta Washington, DC iyo gudaha si ay shabakadaha caalamiga ah waa hanti.
#raadin iyo qiimeyn
UMass Boston waxay raadineysaa kaaliyaha borofisar takhasus gaar ah u leh caddaaladda bulshada iyo hoggaaminta cunsuriyadda ee dugsiyada magaalooyinka
Kulliyadda Waxbarashada iyo Horumarinta Aadanaha ee Jaamacadda Massachusetts Boston waxay ku martiqaadeysaa codsiyada ku-meel-gaadhka kaaliyaha borofisarka ah ee Waxbarashada Magaalooyinka, Hoggaanka, iyo Daraasaadka Siyaasadda ee Hoggaanka Waaxda Waxbarashada inay bilaabato Sebtember 1, 2021 [sii wad akhriska…]
Arrin cusub oo ah In Factis Pax: Joornaalka Online ee Waxbarashada Nabadda iyo Caddaaladda Bulshada (Vol. 12.1)
Arrinta cusub ee In Factis Pax: Joornaalka Online ee Nabadda Waxbarashada iyo Caddaaladda Bulshada (Vol. 12.1) ayaa hadda laga heli karaa khadka tooska ah - bilaash! [sii wad akhriska…]
Jaamacadda California State waxay ansaxisay Daraasadaha Qowmiyadeed iyo Shuruudaha Waxbarashada Guud ee Caddaaladda Bulshada
July 30, 2020 Siyaasadda 0
Guddiga Maamulka Jaamacadda ee California wuxuu ansaxiyay wax ka beddelka shuruudaha waxbarashada guud ee jaamacadda si loogu daro koorso wax looga qabanayo daraasaadka qowmiyadeed iyo caddaaladda bulshada. Tani waxay ka dhigan tahay isbeddelkii ugu horreeyay ee muhiim ah shuruudaha GE ee jaamacadda 40 sano. [sii wad akhriska…]